သင့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုက ဘာများလဲ? – Trend.com.mm
သင့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုက ဘာများလဲ?
Posted on November 26, 2019 by Noel
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ အစားအစာတွေ၊ဆေးဝါးတွေနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဖြည့်တင်းရသလို အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းကောင်းကလည်း သင့်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာနည်းလမ်းများလဲ?
စိတ်ကလေးကျန်းမာအောင် အထောက်အကူပြုပေးတဲ့နည်းလမ်းကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အနှိပ်နယ်ခံခြင်းပါပဲ။တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ၊နှစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ အနှိပ်နယ်ခံတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်အညောင်းညာအကိုက်အခဲပြေစေသလို စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း
– နာကျင်မှု၊စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားတတ်မှု၊စိုးရိမ်ပူပန်လွန်းမှုစတဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်
အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို သင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။အနှိပ်ခံတဲ့အခါမှာလည်း တစ်ကိုယ်လုံးအနှိပ်ခံရင်ပိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိသလို ကုလားထိုင်မှာထိုင်ပြီးအနှိပ်ခံရင်လည်း ဒီလိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေအတူကြည့်ခြင်းက သင်တို့ဆက်ဆံရေးကို ပိုခိုင်မြဲစေ…
Woo Do Hwan နဲ့ Moon Ga Young တို့ရဲ့ဒိတ်သတင်းများ ပျံ့ နှံ့နေ